Buy2Stories Rent (ID-1166) (67Lks) in Mayangone on ipivi.com
Active on site: 81 days
Views: 106 (+1)
2 Stories house rent in7miles, Mayangone Township. Organized by Living-room, Four Master Bed-rooms, One Single Bed-room, Dinning, Kitchen and Bath-rooms. House with Seven Air-conditioners and Generator. Open car parking space.
Asking Price - 5000 USD (Nego)
No Agency Fee From Tenant
၇မိုင် ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ ငှားရန်ရှိသော နှစ်ထပ်တိုက်လုံးချင်းအိမ်ဖြစ်ပါသည်။ မြေအကျယ် - ၃၀၅၅၀ စတုရန်းပေရှိပါသည်။ လုံးချင်းအိမ်အတွင်း ဧည့်ခန်း၊ အိပ်ခန်းကျယ် လေးခန်း၊ အိပ်ခန်းငယ် တစ်ခန်း၊ ထမင်းစားခန်း၊ မီးဖိုချောင်နှင့် ရေချိုးခန်းများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ မီးစက်နှင့် လေအေးပေးစက် ခုနှစ်လုံး တပ်ဆင်ပါရှိပါသည်။ ခြံဝန်းအတွင်း ကားထားရန်နေရာလွတ်နှင့် မြက်ခင်းပြင်များလည်းပါရှိပါသည်။
လုံးချင်းအိမ်၏လစဉ်ငှားရမ်းခ - ဒေါ်လာ ၅၀၀၀ (ညှိနှိုင်း)
Name:2Stories Rent (ID-1166)
Active on site 81 days